Ajjeechaa Yaasoo: Ajjeechaa Yaasootti raawwateefi maatii du'a jalaa 'bahan' - BBC News Afaan Oromoo
Ajjeechaa torban darbe magaalaa Yaasootti raawwateen miseensa maatii isaanii saddeet dhabuu isaanii namni ajjeechaa sana baqataniifi yeroo ammaa gaddarra jiran BBC'tti himan.
''Abbaakoo Fayyisaa Diisaasaa, obboleessa isaa Dhiinsaa Disaasaa dabalatee ijoollee isaafi ijoollee abbaakooti dabalatee, kanumti hortee Disaasaa nama saddeetitu karaa namaaf hin taanen ajjeefame,'' jedhan Obbo Waggaarii Fayyisaa.
''Qawwee nutti dhukaasanii fixanii cidii nutti naqani abidda nutti qabsiisan. Nuti karaa dudduubaa baqannee baane,'' jechuun BBC'tti himaniiru.
Erga gidduu kana rakkoon dhalate eegalee maatiin obbolaawwani lakkoofsaan 21 ta'aniifi magaalaa Yaasoo keessa jiraatan 'waljajjabeessuuf' jechuun bakka tokkotti waliin jiraachuu eegaluu isaanii maatiin himu.
Keessumaa manni isaanii naannoo buufata Poolisiitti dhihoo ta'un isaa nageenyi akka itti dhagahamu gochuu isaa amananis wanta raawwate kana amanananii fudhachuun isaan rakkiseera.
Ijoolleen warrii isaanii dhukaasaan jalaa yeroo ajjeefaman argan baqatani bahanis wanti argan isaan jeeqaa ammallee ''sammuutti hin deebi'in jiru'' jedhu Obbo Waggaariin.
Yeroo ammaa maatiin kuni adeemsa yeroo dheeraa booda qe'ee isaaniirraa baqatanii fira isaanii Aanaa ollaa, Aanaa Haroo Limmuutti gadda taa'aa akka jiran himu.
''Gadda nama saddeeti taa'aa jirra akka maatiitti. Du'uu isaanii mirkaneeffannee du'a gayii taa'aa jirra.''
Waan mudate yeroo jiraattonni dubbatan wanta sukaneessaa hedduu kaasu. Du'uu isaanii qofa osoo hintaane owwaalcha malee akka hafanittis amanu.
Ajjeechaan magaalaa Yaasootti raawwate jedhani jirattonni dubbataniifi gara caalu miidiyaalen biyya keessaa lagatan kuni ajjeechaawwan gara Lixa Oromiyaa ji'oota muraasa darbe dhagahamanirraa adda.
Jiraattonni dubbisneefi Bulchaan Aanaa Haroo Limmuu Obbo Gaaromaa Tolasaa gaafa Roobii darbe lammiileen 40'tti siqan magaalaa Yaasoo keessatti ajjeefamuu isaanii mirkaneessineerra jedhu.
''Gara namoota afurtamaatu qalameera, ijoollee dabalatee. Keessattuu ijoollee dhiira taate haadharraa fuudhanii qalaa turan,'' jechuun BBC'tti himaniiru.
Garuu, 'caasaan gadi jiru odeeffannoo walitti qabuu irratti hanqina qaba' jechuun wanta ta'e qixa sirriin mirkaneeffachuuf humni waraanaa akka seenu gaafataniiru.
Obbo Gaaromaan rakkoo teellana mudate furuuf qondaaltota Aanaa Yaasootti bilbilluus bilbila nu jalaa kaasuu dhabani jechuun BBC'tti himaniiru.
''Fulbaana irraa eegale hanga ammaa nama 52,472'tu nutti baqatee jira. Ammallee buqqaatirra jira namni.''
Yeroo ammaa kaampiiwwan afur keessatti namoonni baqatan kunniin dahoo argatani kan jiran yoo ta'u, kaan mana kireeffatanii, kaan ganda firaa akka jiran warri baqatan himu.
Abbaa kana raawwate irratti wanti jiraattonni jedhaniifi qondaaltonni jedhan waldarba. Qondaalli Naannoo Benishaangul Gumuuz 'hidhattooni ABO Godina Kamaashii jeeqaa jiru' jechuun himu.
Yaada kana bulchaan Aanaa Haroo Limmuullee waliigalu. ''Warra jijjiiirama kana hinfeenetu Gumuuz keessa gareedhaan kana raawwataa jira'' jedhu.
Jiraattonni garuu ''warri yakka kana raawwatan warra biyya bulchaa jiranidha. Isaan kan meeshaa hidhachisuutu jira,'' jechuun dubbatu.
Bulchaan Aanaa Haroo Limmuus ta'e jiraataan biraa magaalaa Kaamashii irraa dubbisne waraanni ABO jiraachuu isaa quba akka hinqabne dubbatu.
''ABO dhiisi gaaddisumti qilkleensa isaa hinjiru. ABO fakkaate kan nufixaa jiru hidhataa mootummaati,'' jechuun jiraataan magaalaa Kaamashii BBC'ti himaniiru.
Gaafa Roobii ajjeechaan raawwachuu isaa dura gaafa Sambataa hojjettonni mootummaa lama miindaa fudhachuuf yeroo adeemaa turanitti ajjeefamuu isaaniifi afur immoo madaa'uu isaanii Obbo Muusaan BBC'tti himaniiru.
Isa boodas gaafa Roobii isa jiraattonni ajjeechaa jumlaa' jedhanin alatti barattoonni lama mana barnoota irraa galan ajjeefamaniiru.
Isa boodas gaafa Jimaataa 'namoonni hidhaman haa hiikaman' jedhuun waldhabdee magaalaa Yaasotti dhalateen namoonni sadii du'uu isaanii Obbo Musaan himu.
Filannoo Yugaandaa ammas Pirezedaantiin biyyattii Yuweerii Museeveeniin mo'ate
Hoggantoonni olaanoo TPLF Finfinneetti mana murtiitti dhiyaatan
'Liiverpuul maaliif Maanchister Yuunaayitidiin akka mo'uuf deeggaru beektaa?'- Marfii
Bara aangoo Pirezedaantummaa Tiraampiitti addabbiin du'a dhumaa gaggeeffame
Hogganaan Taalibaan miseensootaan haadha warraa baayyee hin fuudhiinaa jedhe
Jooy Baayiden sababa Tiraampitti fuula tiwiitera haaraa banatan
Suuraleen durii warraaqsa mirgaa Maartiin Luutar Kiing yeroo suuraa halluutti geeddarman